Ndị njem na-enwe ike ịnọ na Konaklı Ski Center | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyEastern Anatolia Region25 ErzurumNdị njem na-enwe ike ịnọ ugbu a na Konakli Ski Resort
22 / 03 / 2020 25 Erzurum, Eastern Anatolia Region, Foto, General, Turkey, TELPHER
ndị njem na-enwe ike ịnọ na konakli ski ntụrụndụ
Ndi isi obodo Erzurum wetara mmuta ohuru nye njem nlegharị anya nke obodo ahu. Otu ụlọ nkwari akụ nke nwere ọmarịcha ihe akwa nwere akwa 76 ka etinyere na Konaklı Ski Center nke ndị isi obodo ukwu. Na Konaklı nkwari akụ, nke etoliteri okpukpu atọ nke puku mita atọ, a na-atụle nkọwa niile site na ebe a na-enwe nzukọ na okirikiri ebe nkiri na ebe a na-ere nri, ebe a na-enye ọnụ na nkasi obi ọnụ n'ime ụlọ. Aklọ Konaklı, nke dị kilomita 3 site na etiti Erzurum, na-enye ndị hụrụ egwuregwu ski ohere iso ndị na-eme egwuregwu na-eme egwuregwu, yana ebe a na-edebe sịnịma akpụrụ iche maka ndị nwere mmasị na egwuregwu.
MGBE ỌB :R: NKE: “EGO NA-EGO EZI OZI”
N’ịchọpụta nyocha n’okwu ahụ, Onye isi obodo mepere emepe Mehmet Sekmen rụtụrụ aka na ebe obibi bụ isi ihe na-agbakwunye mma na mpaghara njem, o kwuru, “Anyị na-aga n’ihu itinye ego na Erzurum kemgbe ụbọchị anyị were ọfịs. N'echiche a, anyị arụchaala ụlọ ọrụ anyị na Konaklı Hotel ma mee ya ka ọ dịrị njikere maka ọrụ. Chioma diri obodo anyi na ndu ndi njem obodo anyi. ” Mayor Sekmen nyekwara ozi gbasara ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ wuru na arụchara ya na Konaklı Ski Center. N'ịhụta na Konaklı Hotel nwere ọnụ ụlọ 36 na akwa 76, Mayor Sekmen kwuru, “,lọ oriri na nkwari akụ anyị nwere ọnụ ụlọ ọgbakọ nwere ikike nke mmadụ 100 nwere akwa ebe ihe nkiri. E mere ụlọ nkwari akụ anyị n'ụzọ a ga - enwe ike inwe nzukọ na mgbakọ ọgbakọ ma ọ bụrụ na achọrọ ya. ”
Ntinye obi n'ime ụlọ ụlọ kacha mma
Roomlọ ọ bụla nke Konaklı Hotel, nke edoziri anya nke ukwuu, na-adọta mmasị na nkasi obi ya. Ime ụlọ ahụ nwere ihe niile dị na ụlọ nkwari akụ ise, nke gụnyere ihe nnabata, usoro ikpo oku, ụlọ ịsa ahụ, telivishọn, ekwentị, tebụl, nchekwa na ụlọ mposi. Thelọ oriri na ọ hotelụ hasụ ahụ nwere ebe mepere emepe nke 6 puku square mita ma emebewo ebe pụrụ iche maka ndị ọbịa chọrọ ịgbazite akụrụngwa skai. N'ụzọ dị otu a, ndị hụrụ ezumike n'anya ga-ejikọ ihe ndị dị na ụwa anya ma nwee ọ enjoyụ pụrụ iche slopig na Konaklı Ski Center. Site na itinye ego a mara mma, Konaklı Ski Center na Erzurum-Bingöl okporo ụzọ ga-aghọ kpakpando na-acha ọkụ dị ka Palandöken Ski Center.
Ndị Gaziantep bi ugbu a na Eris Ski Center maka ịgba ski
Job: Palandöken na Konaklı Ski Center Mechatronics Technician
Palandoken na Konakli Ski Center na-emepụta ya
Ogige Center Konaklı bụ Oké Mgbapụta
Palandöken na Konaklı Ski Center zigara obodo ukwu
Dağcılar amalitela ịma ụlọikwuu na Konaklı Ski Center
Egwuregwu na Konakli
A na-atụgharị okporo ụzọ Konakli Ski Center
Vali Altiparmak gara na ski na Konakli
Ụlọ Nchịkọta 8.5 Nde Nde Nọọkọta maka Palandöken na Konaklı Ski Centers
Oge 2015 Oge ski malitere na Yalnızçam Ski Resort
Obodo Metzolum Metropolitan
Iwu Mkpesa na ruptkpataghị Ego Ego Iwu Onye Isi Ala kwụsịrị!